Nahazo fandraisana tsara an-tsakany sy an-davany ny Etiopiana Boeing 787-9
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nahazo fandraisana tsara an-tsakany sy an-davany ny Etiopiana Boeing 787-9
Ny masinina fiaramanidina revolisionera vaovao an'ny Etiopiana dia tonga tao Madagascar tamin'ny lanonana fankalazana mafana.
Manampy traikefa amin'ny dia hafa indray, ny Ethiopian Airlines, ilay Aviation Group lehibe indrindra ary Skytrax izay nahazo mari-pahaizana Four Star Airline tany Afrika, dia nanohy ny fitarihany ny teknolojia; fananana sy fiasana ilay fiaramanidina tokana Afrikana B787-9 Dreamliner mankany amin'ireo tanàna afrikana samihafa.
Ny masinina fiaramanidina revolisionera vaovao an'ny Etiopiana dia nitazona an'i Madagasikara tamin'ny lanonana fankalazana mafana iray natolotry ny fanatrehan'ny Minisitra, ny masoivoho, ny manampahefana ary ny mpiara-miasa aminy.
Ilay fiaramanidina Dreamliner avy any Etiopia izay vao nahazo 787-9 dia mirehareha amin'ny mpanjifa, manana fampiononana fanampiny miaraka amin'ny varavarankely lehibe indrindra any an-danitra, efitrano misy tongotra kokoa, tabataba miverimberina, hazavana amam-panahy ary hamandoana ambonimbony kokoa amin'ny 40, 000 metatra.
Miaraka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ambony eny ambonin'ny tany sy eny amin'ny habakabaka, Skytrax voamarina fa Four Star Airline, Etiopiana, dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiraisana an'i Afrika sy fampifandraisana azy amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanamorana ny varotra, fizahan-tany ary ny olona amin'ny fifamatoran'ny olona.